Milina fanala flake
Manidy milina gilasy
Fitehirizana ranomandry mandeha ho azy
Fitaovana fanaterana ranomandry
Fitaovana milanja gilasy
Masinina fanosotra gilasy
Rafitra fampitana pneumatika
Ny tapany lehibe amin'ny evaporator ranomaintintsika dia mahomby amin'ny fitarihana hafanana. Miaraka amin'ny lelam-paosy maivana, mety indrindra izy io amin'ny fanaovana flake ranomandry na dia tsy misy vovoka aza, izay tsy azo atambatra ary azo averina elaela kokoa.
Masinina ranomandry misy rano madio ho an'ny tany
Snowman dia tonga miaraka amina milina ranomandry flake misy rano madio miaraka amina vokatra isan'andro manomboka amin'ny 0,5 taonina ka hatramin'ny 20 taonina. Izahay koa dia manome milina ranomandry flake rano ho anao ilainao.
Fahaizana ranomandry (isan'andro):500kg-60,000kg
Masinina ranomandry flake rano ho an'ny sambo
Araka ny fenitry ny fiarahamonina fanasokajiana, ny milina ranomaindranon-dranomasina ho an'ny sambo dia natao manokana ho an'ny fanamboarana ranomandry an-dranomasina. Miaraka amin'ny fananana miady amin'ny hitrandrahana azy io dia mampiasa ranomasina mivantana hanamboarana ranomandry izy ary noho izany dia fitaovana mety amin'ny jono anaty rano.
Fitaovana milina fanosotra misy flake ao anatiny
Ny milina Flake Ice Containerized dia afaka mihazakazaka mandritra ny adiny 26000 mahery nefa tsy mahomby ary mamokatra ranomandry bebe kokoa. Ny vokatray dia mampiasa endrika maodely, afaka mametraka ao anaty kaontenera. Ny singa milina misy ranomandry misy vovobony dia be mpampiasa amin'ny fampangatsiahana beton, ny lokony, ny fanodinana vokatra anaty rano, ny fitehirizana ny hazan-dranomasina ary ny saha hafa.
Ny firafitry ny insulated ivelany an'ny evaporator, anti-corrosion, angovo bebe kokoa ary ny famokarana;
Ny ampahany mifandray amin'ny ranomandry dia vy vy, azo antoka ary fidiovana
Ny milina ranomandry fantsom-boalavo dia singa vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta mba hahatratrarana ny fenitra fiarovana sy fidiovana.
Ny milina fantsom-boalobikay, fantatra amin'ny anarana hoe mpanamboatra ranomandry, dia natao arakaraka ny fenitry ny sambo tsindry ary ny CE (PED) ASME voamarina. Ny faritra rehetra voakasiky ny ranomandry dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, miantoka ny fahamendrehana sy ny fidiovana.
Milina misy ranomandry Blast vita amin'ny boaty masinina
Milina fitehirizan-dranomandry misy fitoeran-dranomandry mora entina, ny tranokala dia tsy mila fananganana bebe kokoa, mifandray amin'ny rano ary azo alefa haingana ny herinaratra.
Izahay dia mpanamboatra masinina gilasy ary mpamatsy ao Shina. Masinina gilasy misy fitoeram-bokatra izahay, famolavolana faran'izay mafy, fitaovana rehetra napetraka ao anaty fitoeran-tsakafo ISO, ary ao amin'ny fivorian'ny fivorian'ny orinasa ary vita ny fanandramana.
Masinina fanala mangatsiaka mivantana
Ny masinin-dranomaintsika dia mety indrindra ampiharina amin'ny firenena latitude ambany ho an'ny fampangatsiahana indostrialy, fanjonoana an-dranomasina, fitehirizana sakafo, sary sokitra amin'ny ranomandry ary maro hafa.
Snowkey dia manome vahaolana tena tsara ho an'ny famokarana ranomandry sakana na amin'ny alàlan'ny famafana brine na amin'ny fampangatsiahana mivantana.
Plate Ice Evaporator
Ny evaporatoran'ny ranomandry dia latsaka amin'ny karazany roa, izany hoe ny firaka alimina sy ny evaporator vy tsy misy fangarony. Ny evaporator ranomandry plat dia mandray rafitra fanitarana mivantana sy R22, R507A, R404A na amoniaka (R717) ho mpanelanelana amin'ny tontolo mangatsiaka.
Snowman dia mpamokatra masinina gilasy ary mpamatsy. Mifanaraka amin'ny fenitry ny Haccp sy ny FDA, ny masinina misy ranomandry lovanay dia tena mety amin'ny fikarakarana sakafo sy fitehirizana. Izy io dia masinina kely nefa mahomby be ho an'ny filan-dririninao.
Ny mpanamboatra ranomandry lozinay dia nohamarinina miaraka amin'ny teknolojia fanodinana firakotra sy patanty. Tena mitondra hafanana be io. Tsy ilaina hanaovana fanafanana fanampiny, ity milina fanaovana ranomandry ity dia mampiasa entona mafana fluorine mamorona tena mba hanala ny ranomandry, tena mahomby ary mamonjy angovo.
Ny ranomandry slurry dia malefaka ary manana kristaly ranomandry kely kokoa izay mampandeha haingana ny trondro ary mitazona azy ireo ho madio. Miaraka amin'ny rafitra fandefasana, ny ranomandry slurry dia alefa mora foana amin'ny toerana maro.
Milina ranomandry slurry dia natao ho an'ny fiainana lava sy fikojakojana ambany. Manomboka amin'ny sambo mpanjono ka hatrany amin'ny morontsiraka dia manana traikefa sy vahaolana be dia be izahay.
Fitaovana fitehirizana ranomandry mandeha ho azy
Ny fitehirizana ranomandry karazana snowkey type automatique dia mianjera amin'ny karazany roa: karazana containerized sy mitambatra. Mihetsika sy mora apetraka, izy ireo dia natao miaraka amin'ny fahafaha mitahiry hatramin'ny 18 taonina ka hatramin'ny 200 taonina.